အိမ်သုံးဆန်ကြိတ်စက်သို့မဟုတ်စပါးဆန်စက်စက်သည်စိုက်ပျိုးရေးစက်ဖြစ်ပြီးဖွဲကိုဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သည်။ (အပြင်ဘက်ခွံ) ဆန်အစေ့၏. သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး, စပါးခွံကိုနည်းစနစ်မြောက်မြားစွာရှိသည်. အစဉ်အလာအရ, အိမ်သုံးဆန်ကြိတ်စက်ကိုအချို့သောမော်တာများ၊. အိမ်တွင်းသုံးရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအိမ်သုံးဆန်စက်ကိုလုပ်ရန်မှာဆန်ပေါင်ဒါဖြစ်သည်. နောက်ပိုင်းတွင်စပါးကိုသုတ်ရန်နှင့်ပိုလန်ရန်အတွက်ပိုမိုထိရောက်သောစက်များကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဆန်စက်များကိုကမ္ဘာအနှံ့တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးချပြီးအသုံးပြုခဲ့သည်.
အိမ်သုံးဆန်စက်ကြိတ်စက်သည်စာလိပ်နှင့်ဖိအားများအကြားဖိအားနှင့်ဖိအားမှတစ်ဆင့်ကိုယ်ထည်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုသဘောပေါက်သည်။. သံကြိတ်စက်များသည်စပါးအခွံကိုအခွံခွာရန်အသုံးပြုကြပြီး၎င်းတွင်အသုံးပြုသည် ဆန်စက်အသေးစားစက်ရုံ အသေးစားစက်ရုံများအတွက်အသုံးပြုသည်။ အခွံမာသောအရောအနှောကိုအိမ်သုံးဆန်စက်၏အိမ်ခန်းရှိဆန်စက်ကြိတ်စက်ထဲ၌လေတပ်ကအခွံပါသောအရောအနှောကိုဆန်ညိုနှင့်ဆန်ခွံအဖြစ်ခွဲထားသည်။.
2.အန္တရာယ်ကင်းသောအလုပ်။ အိမ်သုံးဆန်ကြိတ်စက်အသုံးပြုခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အပြည့်အ ၀ တင်ဆောင်နိုင်သည်,အလွန်အကျွံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ.
3.အိမ်သုံးဤဆန်ကြိတ်စက်သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရရှိပါကလျှပ်စစ်မော်တာအစားဒီဇယ်နှင့်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နှင့်တိုက်ဆိုင်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ဤဆန်စက်စက်ကိုအာဖရိကသို့တင်ပို့သည် ,ဖောက်သည်အချို့ကဒီဇယ်သို့မဟုတ်ဓာတ်ဆီနှင့်လိုက်ဖက်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးတယ် .
4..လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဆန်စက်စက်ကိုစတင်ပါ,ဖိအား handle.Rice ဖွဲမပါဘဲထွက်လာကြလိမ့်မည်ထိန်းညှိ.